Catalog: Nadiifinta Hawada ee Xawaaraha Hawada
1. AnigaFD (Intense Field Dielectric) farsamada sifeynta：
99.99% waxtarka xayeysiinta ee ka dhanka ah walxaha PM2.5. 3 sifeyn tallaabo. Sifeynta jajabyada (ka weyn PM2.5) adigoo horay u sii shaandheeya. Qaybaha yaryar (≤PM2.5) ayaa maraya shaandhada hore waxaa lagu daaweyn doonaa 12V xukun-goobeed iyo ku faafid-ku-dallaca. Ugu dambeyntiina, walxaha la soo eedeeyay ayaa lagu dhejin doonaa shaandhada IFD.
IFD sifeynta mabaadi'da shaqada ：
Sifeeyaha hawada ifD wuxuu adeegsadaa tamar koronto si uu uga caawiyo ka saarida wasakhda wasakhda hawada. Aynu u kala qaadno hannaanka saddex tallaabo oo kala duwan.
1. Ku shub lacagta korontada hawada into
Talaabada ugu horeysa ee habka ifafaynta hawada ifD waxay hawada ku shubaysaa lacag koronto ah. Tani waxay la mid tahay geeddi-socodka ka jira Hawada Hawada. Mar alla markii korontada la soo bandhigo hawada, wasakhda hawada dul sabaynaysa ayaa qaadaysa khidaddan oo marka la eego waxay noqonayaan ion maadama ay ku qaadaan culays togan ama taban.
2. Hawada maraya shaandhada ：
Hawada ku sidata walxaha wasakhaysan ee wasakhaysan ayaa loo sameeyay si ay ugu dhex marto shaandhada ifD jirka. Miiraha ifD wuxuu u egyahay xaashi malabku ku jiro. Malabkan malabku dhab ahaantii waa kanaalo ay hawadu u socoto waxaana laga sameeyaa polymer.
3. Qabsashada wasakhda iyadoo la miirayo ：
Inta udhaxeysa safafkan badan ee kanaalka hawo-mareenada waxaa kujira waraaqo khafiif ah oo koronto. Xaashidan korantada khafiifka ahi waxay soo saaraan dhul koronto oo xoog leh kaas oo awood u leh inuu soo jiito wasakhda yar yar ee walxaha wasakhda ah ee hadda la soo oogay. Maaddaama dhammaan walxaha hadda la soo oogay, waxay si fudud u soo jiidan karaan korantada oo markay u haajiraan dibedda, waxaa lagu qabtaa darbiyada kanaalka ay marayaan.
Sifeynta IFD Faa'iidada:
Nooca miiraha ee si toos ah loo barbar dhigi karo marka loo eego haddii miirayaasha ifka ay yihiin kuwa si fiican loo yaqaan ee miirayaasha HEPA. HEPA waxay u taagan tahay Bixinta Hawada Qaybta Waxqabadka Sare. Miirayaasha HEPA waxaa loo tixgeliyaa heerka dahabka markay tahay nadiifinta hawada maanta.
Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya HEPA iyo ifD miirayaasha ayaa ah in miirayaasha HEPA ay ubaahan yihiin in la badelo markay gabi ahaanba istcimaalaan. ifD miirayaasha dhinaca kale waxaa loo isticmaali karaa shaandheeye joogto ah. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa in la nadiifiyo 6dii biloodba mar ama wixii la mid ah waxayna ku noqdeen xaaladoodii hore.
Tani waxtar faa iido leh ayey u leedahay macaamiisha maadaama aan loo baahnayn inaan ka jarin kharashka miiraha bedelka dhawrkii biloodba mar shaandhada dhaqameedka HEPA.
2. Naqshadeynta Labada Fan:
Hal mooto oo leh laba-dabayl, laba marawaxad si ay u bixiso hawo ku filan iyo buuq hooseeya.
3. Tamarta UV + Tikniyoolajiyadda Jeermiska Photocatalyst:
Iftiinka jeermiska UVC wuxuu nuujiyaa qalabka wax lagu sawiro (dioxygentitanium oxide) si loogu daro biyaha iyo oksijiinta hawada loogu talagalay falcelinta sawir qaadista, taasoo si dhakhso leh u soo saari doonta uruurinta sare ee kooxaha ion jeermiska jeermiska (ion hydroxide, ion superhydrogen, ion oxygen oksijiin, ion hydrogen peroxide ions, iwm). Astaamaha oksidheeyeynta iyo ionic ee walxahaas qiiqa sare leh waxay u kala jajabin doonaan gaasaska iyo urta kiimikada waxyeellada u leh si dhakhso leh, waxay hoos u dhigi doonaan arrimaha qaddiyadaha la hakiyay, waxayna dili doonaan jeermiska jeermiska keena sida fayrasyada, bakteeriyada, iyo caaryada.
4. Fursadaha Rakibaadda Kala Duwan:
Hore: Qaybaha Isku-xirka Hawada
Xiga: Dhamaan Nidaamka Qaboojiyaha Hawada DC Inverter VRF
Alaabada Sifeeyaha Hawada
Nadiifiyaha Hawada ee Hepa Uv
Alaabooyinka Sifeeya Uv